Mogadishu Journal » 2019 » May » 15
Mjournal :-Nin Soomaali ah oo deggan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa maxkamad rayid lala koray, ayada oo lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, oo uu gaystay xilli uu sarkaal sare ka ahaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Dacwad madani oo ka dhan ah...
Mjournal :-Booliska Soomaaliya ayaa galinkii dambe ee Arbacada maanta shaaca ka qaadday in la xiray mid kamid ah shaqaalaha wasaarada Waxbarashada dowladda federalka kaasoo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay bixitaankii imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka oo dhowaan dib...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) inuu noqdo Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. “Waxaan maanta u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) inuu noqdo Agaasimaha...
Mjournal :-Wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Sadiiq Xersi Warfaa ayaa magaalada Nairobi kula kulmay deeq-bixiyeyaasha,isagoo halkaas ku daahfuray mashruuca horumarinta shaqaalaha Soomaaliya. Kulanka waxaa wasiirka ku weheliyay...
Mjournal :-Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM Ambassador Francisco Madeira ayaa xerada Xalane ee Ciidanka AMISOM ku qaabilay Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar-Dambe) iyo xubno kale oo Wasaarada ka tirsan. Waxa ay kulankooda diirada...
Golaha militariga Sudan iyo dibad-baxayaasha oo heshiiyay
Mjournal :-Golaha milatariga Sudan iyo hogaamiyaasha ururada rayidka ah ee horkacaya dibadbaxayada dalkaasi ka socda, ayaa xalay ku heshiiyay dowlad ku meel gaar ah oo muddo saddex sano gudahood xakunka ku wareejin doonta xukuumad rayid ah oo buuxda. General Yasser al-Atta oo ka...
Puntland oo go’aan ka soo saartay ajaanibta ka shaqeeysa deegaannada maamulkaas
Mjournal :-Wasaaradda Shaqada iyo shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad Goboleedka Puntland ayaa amar dul-dhigtay Shaqaalaha Ajaanibta ah ee ka howlgalla deegaanada Puntland, kadib War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda. War-Saxaafadeedka ayaa dhammaan waxaa lagu amray...
Madaxweyne Xaaf iyo Senator Muuse Suudi oo ka wada hadlay Maqaamka Muqdisho
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalmahaan ku sugan Magalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa uu kulan la qaatay Senator Muuse Suudi Yalaxoow oo ka mid ah Mudanayaasha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka ayaa...
Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo loo dabaaldegayo maanta
Mjournal :-Magalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa Maanta lagu wadaa in lagu qabto Munaasabad lagu xusayo Maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 Bisha May oo ah Maalintii la aas’aasay Ururkii dhalinyarada SYL ,kuwaas oo lagu xusuusto...